ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: မသင်းသင်းမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ - ၁
လက်ရှိ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ၏ ဇနီး မခင်ရွှေလှိုင် သို့ ကိုချိုကြီး (ခ) ကိုဖရယ်ဒီအောင်သန်း ၏ညီမ မမသင်း မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ - ၁
by Thinn Thinn Win on Tuesday, December 25, 2012 at 8:38pm ·
65Unlike · ·
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, Kyaw Gyi AB and 63 others like this.
San Chaung Bobo ဒေါ်လှိုင် ရဲ့ ပြန်လည်ပြန်ကြားစာကိုလည်းမျှော်လင့်နေပါတယ် ။ မသင်းဟာ ဒီစာကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ရေးထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်....။
December 26, 2012 at 1:21am · Unlike · 19
Phome Maung ခင်ရွှေလှိုင်ဟာအစွယ်လိုသူမိဘုရားလိုဖြစ်နေပါလား
December 26, 2012 at 9:33am · Like · 4
Thiha Kyaw face book မသုံးတဲ့အတွက် ရင်းမူးသိုက်ထွန်းဦးရဲ့်fbမှာပဲဖတ်ရလို့ ရေးလိုက်တာပါ၊ မသင်းသင်းတို့မိသားစုနဲု့ ထပ်တူထပ်မျှ မဟုတ်နိုင်ရင်တောင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိုက်ချိုးခံခဲ့ရတဲ့ထိ ကျမ နင့်နင့်သီးသီး ခံစားခဲ့ရပါတယ်၊ မသင်းသင်းတို့မိသားစု ကျမအပေါ်ထားခဲ့တဲ့ စေတနာတွေ ကျမရင်ထဲမှာ အမြဲသိမ်းထားလျက် ရှိနေတယ်ဆိုတာ ယုံပါ၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ။ ကိုချိုကြီး ။ ဦးစိန်တို့လို လူမျိုးတွေ ပါသွားခဲ့လို့ကို ဒါတွေဟာ အစီအစဉ်ရှိရှိ လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျမလက်မခံနိုင်ခဲ့တာပါ၊ ကျမလည်း အမှန်တရားကိုပဲ လိုလားပါတယ်၊ ကိုချိုကြီး။ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ကို ထောက်ရေးတွေလို့ ကျမဘယ်တုန်းကမှ လက်မခံခဲ့ မသတ်မှတ်ခဲ့ပါဘူး၊ အခုမသင်းသင်းရေးထားတဲ့အထိ ကျမအနေနဲ့လက်မခံနိုင်စရာ တစုံတရာ လုံးဝ မရှိပါဘူး၊ ဆက်ရေးပါ လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကျမှ ကျမ တရားဝင် အကြောင်းပြန်စာ ရေးပေးပါ့မယ်၊ ရင်နှင့်အမျှ---ခင်ရွေလှိုင်
December 28, 2012 at 10:54pm · Like · 6
Myat Sandy Waiting for more!
December 30, 2012 at 10:16am · Like · 1
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး စောင့်မျှော်လျှက်ပါ...လို့....
January2at 12:39pm · Like · 2
Pauline Kyi အားလုံးဖတ်နေကြတာ။
January9at 7:10am via mobile · Like
Aung Tha Nge Thiha Kyaw ဖေ့စ်ဘွတ် မသုံးဘူး-လို့လည်း ပြောတယ်... ရင်းမှူး သိုက်ထွန်းဦးရဲ့ ဖဘမှာတော့ ဖတ်ရတယ်-ဆိုတော့ ညည်းကို ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ခင်ရွှေလှိုင်...
January9at 12:22pm · Unlike · 3